Ngabe kuyiqiniso ukuthi izizukulwane ezintsha zifunde kancane? Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Literatura, Izwe ledijithali, Izaziso, eziningana
Okokuqala, kuyadingeka ukuthi kucace mayelana nenqubo yokuhlukanisa isikhawu sesizukulwane ngasinye ngokweminyaka yabantu. Ukuhlukaniswa ngezigaba okwamukelwa kakhulu namuhla kukhombisa ubukhona bamaqembu amakhulu amathathu ezizukulwane: isizukulwane X (esizalwe phakathi kuka-1960 no-1979), isizukulwane Y noma Izinkulungwane zeminyaka (owazalwa phakathi kuka-1980 no-1995) nesizukulwane u-Z (owazalwa ngemuva kuka-1995).
Vele, akusikho ukucatshangelwa okwazi ukushiya wonke umuntu ejabule. Abanye ochwepheshe be-psychology baphikelela ekwengezeni iqembu elisha: isizukulwane esingu-T, maqondana nalabo bantu abazalwa ngemuva kuka-2010. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi kuhlolisiswe izici ezivamile zesizukulwane ngasinye ukuphendula umbuzo wokuqala «Ingabe izizukulwane ezintsha zifunde kancane?» Into elula kungaba ukuveza ukuthi impendulo ithi "Yebo, bafunda kancane", kodwa…
1 Millennials funda kabanzi
2 Kungani uGen Z Enganikeza Amandla Okugcina KuMakethe Yedijithali?
2.2 Amanethiwekhi nomphumela wawo
2.3 Isizukulwane T.
I-Los Izinkulungwane zeminyaka Funda kabanzi
Kubukeka kuyakhohlisa. Kungaba lula kakhulu ukukholelwa ukuthi iGeneration X, noma okubizwa kanjalo ingane boomer (owazalwa phakathi kuka-1946 no-1959) unethuba elikhulu ekufundeni, kodwa akunjalo. Yize Izinkulungwane zeminyaka baba yisizukulwane sokuqala sixhumeke nge-inthanethi, ngezindinganiso eziphakeme zokuziphatha nezenhlalo, abazilahlanga izincwadi zomzimba ukuze bazibuyisele ngemibhalo yedijithali.
Ngokuphambene nalokho, ngokocwaningo olushicilelwe ngu Umhleli Wezazi e-United States, phakathi no-2019 ama-80% we Izinkulungwane zeminyaka funda incwadi nganoma iyiphi indlela, kuze kufike kuma-72% ifunde ikhophi ephrintiwe. Okuthunyelwe okufanayo kusho lokho Los Izinkulungwane zeminyaka AbaseMelika bafunda isilinganiso sezincwadi ezinhlanu ngonyaka. Ngokunjalo, ngesikhathi sokuthenga abazi kangako ngombhali njengokuklanywa, inani nentengo.
Futhi, isizukulwane Y sifake ukufundwa oku-inthanethi njengengxenye yansuku zonke yempilo yabo (I-Independent, 2016). Lokhu akumangazi, kukhona imitapo yolwazi edijithali enezinto eziningi futhi okungabonwa mahhala. Ngenxa yalokho, ukufundwa okumaphakathi kwamasonto onke - kulezo Izinkulungwane zeminyaka owazalelwa eLatin America, isibonelo - weqa kalula amahora ayisithupha ngesonto. Yize izingosi ezinjenge-Amazon zingabiki ukwehla okukhulu ekuthengisweni kwezincwadi eziphrintiwe, iGeneration Z ingakushintsha ngokuphelele lokhu kukhetha.
Kungani uGen Z Enganikeza Amandla Okugcina KuMakethe Yedijithali?
Ngendlela elula kakhulu: labo abazalwa ngemuva kuka-1995 ngokusobala bangobuchwepheshe. Ngokufanayo, lokhu kukhombisa ukubandakanyeka okukhulu ezindabeni zemvelo. Ngakho-ke, Isizukulwane Z abantu bavame ukubuka ukuphrinta izincwadi njengomsebenzi osetshenziswayo, okungenasidingo, okuphikisana nokulondolozwa kwemvelo.
Kodwa Lokhu akusho ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ukuthi amalungu eGeneration Z afunde kancane uma kuqhathaniswa nezinye izizukulwane. Cha. Ngokuba nenani elikhulu labanikezeli bemidiya bemininingwane ebuyekeziwe, i- "Z-gen" ingachitha isikhathi esiningi ichitha imininingwane ... impela, enye into ukuthi uma benemibandela eyakheke kahle yokuhlukanisa ubuqiniso bokuqukethwe.
Amanethiwekhi nomphumela wawo
Isimo sezinkundla zokuxhumana sikhulise lo mkhuba ngenxa yokukwazi kwawo ukuxhuma abantu abanezintshisekelo ezifanayo, okukhuthaza ukushintshana okukhulu kwemininingwane. Ngemuva kwalokho, amabhuku edijithali noma e-ncwadi kungenzeka kube ifomethi ekhethwayo yabafundi kusukela ngawo-2020 kuya phambili. Ngaphezu kwalokho, kuzoba isikhathi lapho labo abazalwa ngemuva kuka-1995 bezoba neminyaka efanelekile ezingeni lokuhweba. Yebo, yize kunesidingo sokukhawulela lokho incwadi ebonakalayo iyaqhubeka nokudlula okwedijithali ngokuthengisa nokuthanda.
Ngokuqondene nesizukulwane sakwa-T, kusesekuseni kakhulu ukunquma ukuthi yini ezoba imikhuba yokufunda yabantu abazalwe ngemuva kuka-2010. Ngokufanayo, kunzima kakhulu ukucacisa ukuthi umthelela wezohwebo kuleli qembu uzoba yini ekuhwebeni ngezincwadi. Laba ngabantu "Abazalwe benedivayisi yokuthinta ngaphansi kwengalo", ikhathalogu ngokusebenzisa ama-algorithms enzelwe ukuqoqa okuthandwayo nokuncamelayo (Izixhumanisi - i-DW, i-2019).
Okokugcina, kuyadingeka ukubheka (ngokusho kwengosi ye-BBVA, 2018) lokho IGeneration T kusukela ngo-2016 ingaphezu kuka-80% wezingane ezine-inthanethi. Kufaka phakathi izithombe zezingane ezinkundleni zokuxhumana zezihlobo, kanye namaphrofayili abo aphethwe ngabazali babo. Ngalesi sizathu, umhlaba we-analog uyindawo yonke engaziwa kubo ... ngenkathi ukuxhuma kuyindawo "ejwayelekile".
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Ingabe izizukulwane ezintsha zifunda kancane?
Okuthunyelwe okuhle. Idatha, ikakhulukazi evela e-USA, ngicabanga ukuthi ingadluliselwa ku-EU. Kuyiqiniso ukuthi bafunda okwengeziwe, kodwa ngayiphi imfanelo?
Ukukhululeka kokushicilela ngokwakho kuye kwaholela ezinkulungwaneni zezihloko nabalobi abasha abasizakala ngokudonsa. Emakethe ungabona ikhwalithi empofu ye-edishini, ukwakheka, ukulungiswa, nakho konke okushiya kungathandeka.
Ngicabanga ukuthi inikela ngenye indatshana. Asethembe ukuthi lokhu kuyabaleka. Sanibonani.